Akụkụ mbụ nke 6.000 Ulefone Gemini ga-efu dollar 119.99 | Gam akporosis
E nwere obere ka ị nwee ike zụta Ulefone Gemini. A ga-enweta ekwentị Ulefone ọhụrụ site na webụsaịtị wepụtara na February 14, ụbọchị Valentine. Na ọnụahịa dị egwu: 119.99 dollar, ihe dị ka euro 114 ịgbanwe.
Maka ha onye nrụpụta na-enye gị mbelata dollar 70, Ego 40 na ekwentị na 30 euro iji zụta ngwa na otu weebụsaịtị Ulefone, nke ị ga-enweta ozugbo. Iji mezuo nke a, ị ga-edebanye aha n'akwụkwọ akụkọ ndị nrụpụta site na njikọ a.
Ihe ndị a bụ njirimara teknụzụ nke Ulefone Gemini
Tupu anyị enyochaa atụmatụ nke ekwentị Ulefone ọhụrụ, anyị ga-echeta na, n'agbanyeghị ọnụahịa ya mara mma, Gemini nwere aru n'otu ahu na nchapu nchacha nke na-enye ekwentị ahụ ịdị mma na mma.
Laghachi na ngwaike nke Ulefone Gemini, kwuo nke ahụ Ekwentị a ga-enwe ihuenyo mejupụtara IPS 5.5-anụ ọhịa nke ahụ ruru mkpebi Full HD (1920 x 1080 pikselụ).
Ihe nhazi gị bụ nke a MediaTek MT6737T, quad-core soC nke ruru ọsọ elekere ruo 1.5 GHz na nke nwere isi 41.000 ọ ruru na AnTuTu kwere nkwa karịa arụmọrụ zuru oke maka ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ. Nchekwa 3 GB Ram na 32 GB nke nchekwa dị n’ime nke onye ọhụụ Ulefone Gemini ahụ nwere. , gbakwunye igwefoto n'ihu megapixel 13.
Ekwentị, nke nwere ihe mmetụta mkpịsị aka, na-apụta maka ya 3.250 mAh batrị, karịa iji kwado ogo zuru oke nke ngwaike ngwụcha ma nye nnwere onwe maka otu ụbọchị ma ọ bụ otu ụbọchị na ọkara. Na mgbakwunye, onye nrụpụta gosipụtara na Ulefone Gemini ga-enwe ọnọdụ Super Batrị nchekwa nke ga-ekwe nkwa usoro ọrụ ekwentị, dịka ịkpọ oku, iji gbatịa batrị n'oge dị oke egwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Ulefone » Akụkụ isii mbụ nke Ulefone Gemini ga-efu dollar 6.000